Fitbit inoda kutarisana neApple Tarisa zvakare | Ndinobva mac
Ingani nguva isu tanga tichitaura nezve vanhu vangani vanoda kumira kune iyo Apple Watch, asi hapana munhu anokwanisa kusunungura Apple Watch? Zviripachena kuti sezvo pfungwa yeApple Watch yakaunzwa, Apple yakatamba makadhi ayo zvakanaka uye ndeyekuti haina kutarisisa kupfeka kwayo sechigadzirwa chakatorwa kubva kuData rehutano. asi, akasvika pairi sechishongedzo chemafashoni.
Handina kumbobvira ndave neyakaenzana bhendi senge iwo ari kutengeswa nemakambani mazhinji nhasi, asi ndiri pachena nezvechinhu chimwe chete, aya marudzi emabhendi haasi mabhendi aunogona kupfeka kana iwe uchienda kunzvimbo yemitambo, kuita musangano wakakosha kana, nyore, iwe unoda kuve wakasarudzika yechiitiko chakakosha.
Muhupenyu hwangu hwezuva nezuva, ndaigona kushandisa rimwe remabhande akawandisa pamusika, asi zvinoita kunge sarudzo iri nani kushandisa yangu yakasarudzika Apple Watch. Ini ndinogona kuimisa netambo dzandinoona dzakakodzera pane yega kesi uye kuti ndinoigadzirisa nemabhandi erabha kuti nditaridzezve Sporty. sekunge sekunge ini ndinoisa tambo yeganda kuti iende nejekete netayi, inoramba ichiita basa rayo.
Izvi hazvina kuzotarisirwa nemakambani erudzi urwu rwekupfeka, chimwe chinhu chakaitwa naApple kubva pane pfungwa yake. Mumwe wevakwikwidzi vekutanga veApple Watch yaive Dombo, asi isu tese tinoziva kuti nguva pfupi gare gare yakatengwa nekambani yeFitbit kuitira kuti, nguva pfupi yapfuura, iite kuti inyangarike inofarira mabhendi ayo. Vakaona kukura kuri kuita zvikamu zvavo kusvikira Apple Watch yagadzwa, mushure mezvo yakatanga kudonha uye hazvishamise Sezvo munhu akatenga yakaenzana bhendi achinamata, kana aine chiitiko chakakosha aizoichengeta mudhirowa.
Zvakanaka, Fitbit aifanirwa kuzviziva uye humbowo hweichi kwaive kuvhurwa kwayo kweFitbit Ionic wachi pamusika. Ichokwadi ndechekuti inoratidzika kunge yakanaka kwazvo, asi haina kupedzisa kuzadza vateveri veiyo mhando uye ndeyekuti kana tikachienzanisa neApple Watch, ine zvakawanda zvekuvandudza. Akazoisa iyo Fitbit Blaze pakutengesa, asi zvakadaro yaive isina kugamuchirwa kutarisirwa uye ndeyekuti vatengi vakaona chigadzirwa chinodhura $ 350 uye chisina kupera.
Zvakanaka, Fitbit anoramba kufa munyika yemawadhi akangwara uye ikozvino anouya nekubheja nyowani kukwikwidza neApple Watch. Kubhejera kwakanyanya uye kunogona kunge kuri izvo zvainyatsomirirwa nevateveri vake. Hatina zita rake parizvino, asi iwe unogona kuona kuti anotaridzika sei nekuda kwemufananidzo wakasvinwa watakakuratidza mumusoro wechinyorwa chino.
Iyo Fitbit CEO yakati:
Ini ndinofunga masimba ekuchinja achachinja muna 2018. Sezvambotaurwa pamusoro apa, tinotarisira kuve nekuwaniswa kwakawanda kwevanhu vazhinji mumusika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Fitbit inoda kutarisana neApple Watch zvakare
Apple inoda iyo Park brand uye denderedzwa rayo kuve patent